Ogaden News Agency (ONA) – 11 Qof oo Jidh Dil ugu dhintay Xabsiga Jeel Ogaden
11 Qof oo Jidh Dil ugu dhintay Xabsiga Jeel Ogaden
Posted by ONA Admin	/ July 26, 2013
Jigjiga: Xabsiga aadka u daran ee Jeel Ogaden ayaa waxaa ku dhintay 11 Qof oo isugu jira 2 haween oo ummulo raacay, caruurtoodi yar yara iyo rag dhalinyaro ah. Dadkan ayaa dhinta kadib markii ciqaabo aad u daran lamariyay.
Wakaalada Wararka Ogadeniya ayaa heshay magacyada dadka jidh dilka ugu dhintay xabsiga Jeel Ogaden waxaana kamid ah
1. Qureesh Maxamed Xaashi
Qureesh Maxamed Xaaji waxa ay aheyd gabadh uur ah oo siday laba ilmood. Haweenaydaasi waxa ay ku ummul raacday xabsiga Jeel Ogaden iyada iyo labadii ilmood ee mataanaha ahaana halkaas ayay ku dhinteen.
2. Ikraan Cali Mahad
Ikraan Cali Mahad waxa ay iyana gabadh ku ummul ah oo ku dhex dhashay Jeel Ogaden. Haweenaydaan ayaa jidh dil ba’an loo geystay oo ay la dhimatay. ilmahii ay dhashay waxa uu xabsiga ku naas nuugayay iyada oo meyd ah muddo laba habeen ah kadib markii ciidamada illaalada xabsiga jeel Ogaden ay diideen in ilmaha laga qaado marxuumada meydkeedana la’ aaso.
3. Gaanbeyse Aadan Sanweyne
Ganbeyse Aadan Sanweyne ayaa isna kamid ah 11 marxuum ee jidh dilka ugu dhintay xabsiga Jeel Ogaden.
Ciidamada Gumesyiga waxmagaratada arxanka daran ee ilaalada xabsiga Jeel Ogaden ayaa meydka saddexdaas marxuum ee kore labada haween iyo caruurtooda iyo ninkaas Gaanbeyse lagu magacaabi jiray dibada u soo saaray todobaadkii hore. Meydadka intii kale waa qariyeen wax ay ku sameeyeena lama sheegi karo wali meydadkaas kale in la aasay wali iyo inkale.
Nuur Cubudhiye says:
Akhrinta warkan wuxuu igu beeray Murugo badan.maalin walba Tigre-ga iyo kuwa u adeega waxay duleeyaan dadka somalida ah ee ku dhaqan Ogadenia.aniga laftaydu waxaan ka soo baxsaday Ogadenia.Xidhiidh joogta ayaan la leeyahay Eheladayda ku nool wadanka.Runtii waxay ii sheegaan mar walba dad ay Tigre-gu(the foolish and cruel TPLF)dileen,xidheen,dhaceen,iwm.Ujeedada Tigre-gu waa inaan is- dhiibno.Taariikhdeena ayayse waxba ka aqoon.waligeed wax kasta oo ku dhaca shacbiga geesiga ah ee somalida Ogadenia marna maysa is-dhiibin.Tan iyo Mennilike,X.selase iyo Mingistu.mar walba ooy na cadaadiyaan cadhadanada iyo mintidnimadanada iyo midnimadanada ayaa aad kor ugu kacda.Ilaahayna insha Allah wuu nala jira.Ethiopia diiday in arrinta Ogaden wadahal cadaalad ku dhisan lagu xaliyo.waxaan aaminsanahay,Halganka Ogaden inuu noqon doono sababta Ethiopia burburin doonta,insha Allah.waxaan ku talinayaa 2 arrimood.ONLF ha dajiso istirajiyad dhaqaale,milateri,siyaasadeed iyo abbaabul(kicinta shacabka) ee wakhti dhaw(3-7 sanno),wakhti dhexe(7-15 sanno) iyo mid dheer(15-25 sanno).Qoddobka kale waxaan shacbiga somalida Ogadenia gudaha iyo dibbadaba ku dhiirigelinayaa inay Jabhadda si buuxda u taageeraan.hadaan sidaa yeelo,waxaan aaminsanahay in inta lagu jiro Qorshaha wakhtiga koowaad isbedel la taaban karo oo ina-faraxgeliya,Ethiopia-na Jab iyo Argagax ku rida,insha Allah aan gaadhayno.wa lilahil cisa wa li rasulihi wa lil muminiin.Freedom,Peace,Prosperity and Justice for somali Ogadenis.Down with foolish and cruel TPLF and their Associates.amin.
Peace for ogadenia says:
War soo Jir naxo nigumayaalo
war soo Wadno danqado nigumayalo
war cid aan idnga aheen miyee sugeysa OGADENIA
Taloo mi-isweydiseen Gabdeheen Hoyooyinkeeni, Abayaasheeni, Aqonyahankeeni, mashaaiqtii, abwaanintii, iyo kuwa kalobadan, mexeetahay noloshooda gudaha OGADENIA
Fadhlan walaalayal kaca oo gurmada oo aan kadicino cadowka DULKEENA
Ethiopia waa Gaalo ninkii gaal raaco Maciisa umbuuyahay
Dabaqoodino Soolabta oo WALAALIHIIN ha ujabinina Cadowga Allah iyo Islamka oo ah Ethiopia
BY: WADANI DARTE